प्रविधी | Digital Dainik | Page 3
निर्वाचन सम्बन्धी जिज्ञासाको लागि कल सेन्टर र मोबाइल एप सञ्चालनमा
निर्वाचन सम्बन्धी जिज्ञासाको लागि कल सेन्टर र मोबाइल एप सञ्चालनमा काठमाडौं, बैशाख १५ः निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजदेखि कल सेन्टर र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सूचना प्रवाहलाई चुस्त र प्रविधिमैत्री तुल्याउने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले कल सेन्टर र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको हो । कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको कल सेन्टरबाट मतदाता र सरोकारवालाका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ १६६००१४४२२२ नम्बरबाट तत्काल प्राप्त हुनेछ । नेपाल टेलिकमको नेटवर्कबाट उक्त नम्बरमा फोन गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । कल सेन्टर २०७४ वैशाख १५ गतेदेखि आगामी असार ३ गतेसम्म बिहान ८ देखि …
सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगः परिणाम गम्भीर काठमाडौं, बैशाख ९ः प्रविधिमा सहज पहुँच र इन्टरनेट विस्तारले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल लोकप्रिय बन्दै आएको छ । साथीसंगीसँग निकट हुन, आफ्ना भावना अरुसम्म पुर्याउन मात्र नभएर सूचनाको प्रभावकारी माध्यमका रुपमा पनि फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको भूमिका देखिएको छ । युवकयुवतीमात्र नभई बालबालिका र प्रौढ अवस्थाका सर्वसाधारण पनि सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त भइरहेका छन् । लोकप्रियता बढेसँगै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र त्यसका गम्भीर परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसैको पछिल्लो कडीका रुपमा देखिएको छ, सामाखुसीमा रहेको प्रहरी विद्यालयका छात्र कुन्दन …
टेलिकमले ल्यायो नयाँ बर्षमा यस्तो अफर !
टेलिकमले ल्यायो नयाँ बर्षमा यस्तो अफर ! काठमाडौं, चैत्र ३१ः नयाँ वर्ष २०७४ को अवसरमा नेपाल टेलिकमले आफ्नो उपभोक्तालाई बोनस दिने घोषणा गरेको छ । टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तीअनुसार एकसय वा दुईसयको रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत बोनस दिने र ५ सय र एकहजारको रिचार्ज गर्दा १५ प्रतिशत व्यालेन्स बोनस दिने उल्लेख छ । यो सुविधा रिचार्ज कार्डबाहेक अन्य तरिकाबाट रिचार्ज गर्दा समेत पाइने टेलिकमले बताएको छ । बोनस व्यालेन्सको भ्यालिडिटी ३ दिनको मात्रै हुनेछ । अर्थात, उपभोक्ताले बोनस पाएको व्यालेन्स तीन दिनमा सक्नुपर्ने हुन्छ । यो सुविधा चैत ३० देखि नयाँ वर्षको बैशाख १३ गतेसम्म लागू हुनेछ । यसैगरी, डाटा प्याकेजमा …
निर्वाचनविरुद्ध लेखे लाख जरिवाना !
निर्वाचनविरुद्ध लेखे लाख जरिवाना ! काठमाडौं, चैत्र ३०ः सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै गतिविधिमा त संलग्न हुनुहुन्न ? भएको भए एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ है । निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय चुनावमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएस प्रयोगकर्तालाई समेत निगरानीमा राख्ने र उल्लङ्घन भएको पाइएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यस पटकदेखि स्थानीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा समेत निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि …
विद्यार्थीहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै बंगलादेशमा सरकारले ल्यायो यस्तो योजना ?
विद्यार्थीहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै बंगलादेशमा सरकारले ल्यायो यस्तो योजना ? एजेन्सी, चैत्र २५ः बंगलादेशमा रातमा ६ घण्टासम्म फेसबुक ब्लक गर्ने योजना बनाएको छ । बंगलादेशी समाचारपत्र डेली स्टारका अनुसार मध्यरातदेखि फेसबुक ६ घण्टासम्म बन्द गरिने छ । खासगरी युवा तथा विद्यार्थीहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो कदम चाल्न थालेको बताइएको छ। उक्त पत्रिकाका अनुसार मन्त्रीपरिषदले टेलिकम मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा फेसबुले विद्यार्थीहरुलाई असर पारिरहेको र युवाहरुको कार्यक्षमतामा पनि ह्रास ल्याएको उल्लेख छ । मन्त्रालयले बंगलादेशको टेलिकम नियामक आयोगलाई यस विषयमा आफ्नो …
होस गर्नुहोस, यस्तो नम्बरबाट फोन आउला है ?
होस गर्नुहोस, यस्तो नम्बरबाट फोन आउला है ? काठमाडौं, चैत्र २५ः के तपाईंलाईं विदेशी नम्बरबाट लगातार मिसकल आइरहेको छ ? के त्यो नम्बर टिउनिसयाको देखाउँछ ? यदि त्यसो हो भने ख्याल गर्नुस्, त्यो नम्बरमा तपाईंले कल ब्याक गर्दा सबै ब्यालेन्स सकिन सक्छ । केही दिन यता टिउनिसियाको नम्बर देखाउने +२१६-९८०९०४२७ जस्ता नम्बरबाट नेपाली मोबाइल प्रयोगकर्तालाई मिसकल आइरहेको छ । कलब्याक गर्दा कतिपयको मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्स रकम सबै सकिएको छ । बेसीशहरका किशोरकुमार बस्नेतका अनुसार आफूलाई पनि मिसकल आएको र साथीहरूले होला भनेर कलब्याक गरेको तीस सेकेन्डमा ६१ रूपैयाँ चट भएको बताए । टेलिकम प्रदायक संस्थाहरुले यो ठगी धन्दा …
अब फेसबुक म्यासेन्जरमा पनि लोकेसन
अब फेसबुक म्यासेन्जरमा पनि लोकेसन काठमाडौं, चैत्र २४ः लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले म्यासेन्जरमा लोकेसन देखाउन मिल्ने सुविधा थप गरेको छ । एप्पल र गुगल म्यापले लाइभ लोकेसनलाई आफ्नी फिचरमा प्रयोगमा ल्याएपछि फेसबुकले पनि प्रतिस्पर्धाकै लागि यो फिचर आफ्नो म्यासेन्जरमा प्रयोग गरेको हो । म्यासेन्जरमा साथीहरूसंग भेटघाट गर्दा लोकेसनको जानकारी लिन–दिन झन्झटिलो हुने हुँदा पनि यो सुविधाको आवश्यकता देखिएको हो । यसमा आफू रहेको लोकेसन दिएपछि साथीले सही ठाउँ फेला पार्न सक्छन् । यसरी पठाइएको आफ्नो लोकेसन करिब ६० मिनेटसम्म साथीको म्यासेन्जरमा रहन्छ । लोकेसन पहिले फेसबुक एपको मुख्य विशेषता थियो । …
नेपाल टेलिकमद्वारा निःशुल्क सीमकार्ड वितरण, कतै तपाई छुट्नुभयो की ?
नेपाल टेलिकमद्वारा निःशुल्क सीमकार्ड वितरण, कतै तपाई छुट्नुभयो की ? बागलुङ, चैत्र २२ः नेपाल टेलिकम बागलुङले आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क रुपमा सीमकार्ड वितरण गरेको छ । यहाँ जारी चैत्राष्टमी मेलामा ‘स्टल’ नै राखेर टेलिकमले प्रिप्रेड मोबाइलको सीमकार्ड बाँडेको हो । दुई दिनमै एकहजार भन्दा बढीले सीमकार्ड लगेको टेलिकम कार्यालयले जनाएको छ । आउँदो बुधबारसम्म मेला भर्न आउने दर्शकलाई निःशुल्क रुपमा सीमकार्ड उपलब्ध गराइने कार्यालय प्रमुख केशव शर्माले बताए । ग्राहकले एकप्रति फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि मात्र बुझाएर रु ५० ‘ब्यालेन्स’ भएको सीमकार्ड निःशुल्क पाएका छन् । ‘बजार प्रबद्र्धनको लागि र ग्राहकको सुविधाका लागि निःशुल्क रुपमा …
एसईई परीक्षार्थीलाई एनसेलले दिने भयो एक रुपैयाँमा सिम
एसईई परीक्षार्थीलाई एनसेलले दिने भयो एक रुपैयाँमा सिम काठमाडौं,चैत्र १९ : एनसेलले २०७३ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरुका लागि ‘पहिलो सिम’ नामक विषेश अफर ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत परीक्षार्थीले मात्र १ रुपैयाँमा एनसेलको प्रिपेड सिम खरिद गर्न सक्नेछन् र ३० दिनसम्म ५ वटा आफ्नो माइफाइभ नम्बरमा अनलिमिटेड कल सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् । यो योजना आइतबार चैत्र २० देखि लागू हुने छ । एसईई परीक्षाका परीक्षार्थीले आफ्नो परीक्षा प्रवेश पत्र र आफ्नो आमा वा बाबुको नागरिकताको फोटोकपी बुझाई नजिकैको एनसेल सेन्टरबाट सिम लिन सक्नेछन् । यो योजना अन्र्तगत परीक्षार्थीले सिम खरीद गरी ५० वा सो …
१९ तले भवनको बीचबाट यसरी कुद्छ रेल (भिडियोसहित)
१९ तले भवनको बीचबाट यसरी कुद्छ रेल (भिडियोसहित) एजेन्सी, चैत्र १५ः नयाँ नयाँ प्रविधिमा अगाडी रहेको चीनमा १९ तले भवनको बीचबाट कुद्ने रेल निर्माण गरिएको छ । दक्षिण–पूर्वी सहर चोङकिङको क्षेत्रफल ३१ हजार वर्ग माइल रहेको छ जहाँ ४.९ करोड जनसंख्या बसोबास गर्ने गर्दछन् । त्यही भएर भौतिक निर्माण गर्नेहरु र सहरको विकास योजना गर्नेहरुले नयाँ–नयाँ तरिकाहरु अपनाउन बाध्य भएका छन् । १९ तले भवनको छैटौँदेखि आठौँ तल्लासम्म रेलवे स्टेसन निर्माण गरिएको हो । उक्त भवनमा बसोबास गर्नेहरुले चोङकिङ रेल ट्रान्जिट नम्बर २ मा आफ्नै लिजिबा स्टेसनबाट चढ्न सक्नेछन् । भवनमा बस्नेहरुलाई रेलको आवाजले दुःख नदेओस् भनेर विशेष उपकरण समेत …